Tan Maqaarka Tan WM Dolls 162 CM Dhab ahaan Jinsi Doll Aurora
Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,F koob caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada caato ah
Aurora 162 CM F-Cup WM Tan Maqaarka TPE Doll Doll
Aurora waa caruusad jinsiyeed TPE ah oo dhererkeedu yahay 162 cm. Waxaan joogay guriga saaxiibkay waxaanan ka wada hadlaynay jacayl. Wuxuu yiri waan ku jeclahay, wuxuuna u maleynayaa in waqtiga la joogo. Waxaan ka fikirayay muddo dheer. Waxaan xirnaa shaati spandex-yar oo goonni ah iyo goon yar, wax intaa dhaafsiisan. Dhar nigis ah Si dhakhso ah ayaan u oggolaaday oo waxaan ku booday sariirta. Dhamaanteen waxaan nahay bikrado. Wuxuu iska siibay shaatigeygii marki hore, ibta naasaha muruqsaday, ka dibna leefay dhamaan tiirarka wareega. Wuu igaxeeyaa.